ခေါ်ပြီး.မဇ္ဈိသုခကျောင်းတော်သစ်ဆီသို့ ချီတတ်ခဲ့တော့၏.အမိမြန်မာပြည်မှာတော့ ရေတွေပတ်ကြပျော်ကြသော်
လည်း မိမိတို့မှာတော့..ကိုယ်အချင်းချင်း အပြန်အလှန်ရေတွေပတ်ကြ..တဦးနဲ့တဦး ဖုန်းလေးတွေနဲ့ ဖိတ်ပြီး..တွေ့
ဆုံပွဲသဘောမျိုးဖြင့်.ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့..တွေ့ဆုံပွဲမှာ .ကြာဇံဟင်းခါး..သာဂူယို.လိမ္မော်သီး ကျောက်ကျောတို့ဖြင့်
ဧည့်ခံကျွေးမွေးပါတယ်..၄င်း..မဇ္ဈိမသုခကျောင်းသစ်သည်လည်း.ကဋ္ဌအားဖြင့် ၃၀..ကျော်မျှ အမိမြန်မာပြည်မှလာ
ဘယ်လိုလဲ .စသည်စသည်တို့ရင်ထဲမှာဖြစ်တည်ခဲ့လေတော့ ၏..အို့..ကဋ္ဌ ၃၀ ကျော် ကျယ်ဝန်းလှသည့်မြေနေရာ
ကြီး.ပါလား..ဒါတွင်ပဲလား..ဟုတ်ဘူး..ကြာဇံဟင်းခါးလေးသည်လည်း..အမိမြန်မာပြည်ကို လွမ်းဆွတ်သည့်အနေဖြင့်ချက်ထားတဲကလက်ရာသည်ကား..အကျွန်ုပ်ကျောင်းသားလေးကား.၃ ပုဂံတိတိလွေးမိတော့၏..အစားအသောက်နဲ့ပတ်သတ်လျှင်တော့မရှက်တမ်းပြောဖြစ်တတ်၏..
တွေ့ဆုံပွဲ ဆိုသည့်အတိုင်း..တွေ့လိုက်တာနဲ့ ကုလားစကားလေးတွေနဲ့နှုတ်ဆက်ကြ.အင်္ဂလိပ်လိုတသွယ်..
အကျွန်ုမှာကား..မြန်မာလိုပဲ တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ် ညီလေးတို့ ဆိုပြီး ပြန်လည်နှုတ်ဆက်မိတော့၏..
ညီလေးတို့ဆိုတော့ မိမိကား အသက်ကြီးပြီလေ..ရာသီဥတုရဲ့ ပူလောင်မှုကို ဥပေက္ခာပြု.ဖတ်လက်စစာအုပ်ကို
ပိတ်ကာ..လာနေတဲ့ဖုန်းကိုကောက်လို့ကိုင်ပြီး..ချွေးစို့စို့ အပြေးလေးမို့ လာခဲ့ပြီကော..လား..ညီလေးတို့ရေ..
လမ်းတွင် စရဏ ဘူတာကြီးကိုကျော်ဖြတ်.တိုက်တာအဆောက်ဦးအသစ်များ..ကြွေကျနေသောသစ်ရွက်များ.
တချို့သစ်ပင်တို့သည်လည်း အရိုးပြိုင်းပြိုင်းထလို့.နွေရာသီရဲ့ ပူပြင်းတဲ့ဒဏ်ကြောင့်.သစ်ရွက်တို့သည်လည်း.
မတွေ့ရ..ဟို ခပ်ဝေးဝေးမှ ဥသြငှက်တကောင်ရဲ့ ထင်ရှားပြတ်သားစွာ အလွမ်းသီချင်းညီးသလို..ဥသြ..ဥသြ.တဲ့.
အခုတောပလဲ ..သင်္ကြန်ဆိုတဲ့ အချိန်တွေဟာ.မတွေ့ကြုံရတာ..၃နှစ်အတွင်းသို့ ရောက်ခဲ့ပြီလေ..အို.ဘယ့်.
မှာ..သတိရလွန်းလို့ အမှတ်ရလွန်းလို့ တနည်းအားဖြင့်အမိမြန်မာပြည်ကိုလွမ်းဆွတ်တသ သတိရတဲ့အနေနဲ့.
တွေ့ဆုံပွဲလေးတခု အဖြစ် ဖန်ဆင်းလိုက်ရတယ်လေ..
အဖြစ်ဖန်ဆင်းတတ်ကြတယ်ဆိုတာ ရွှေမြန်မာတို့ရဲ့ ဓလေ့လေးတခုပါပဲဆိုတာ..
ဟော..၁၇ ရက်နေ့မြန်မာနှစ်ဆန်း တရက်နေ့ရဲ့အလှူရှင်နဲ့လဲ စကားလက်ဆုံပြောမိပြန်တော့လဲ
လန်ဒန်ရောက် မစောငြိမ်းအေးနဲ့လဲ မမော်နိုင်မပန်းနိုင်ပြောပြီး
သူတို့သည်လည်းကြာဇံဟင်းခါး ချက်ပြီး ရှောက်သီးသုတ်လေးသုတ်ကာမိတ်ဆုံပွဲအဖြစ်ပြုလုပ်ကြတယ်တဲ့လေ
အော်..မမေ့နိုင်တဲ့ မြန်မာသင်္ကြန်ကို..ရွှေမြန်မာတို့သည်လည်း.မြန်မာပြည်မှာ မရှိစေကာမူ.
မြန်မာအစားအစာလေးတွေချက်ပြုတ်ပြီး.သင်္ကြန်ရဲ့ အမှတ်တရနေ့လေးတွေ ဖန်ဆင်းတတ်ကြတာတွေဟာ.
တူမောင်တယောက်ကလဲ..သူတို့ကတော့ တယေက်ကို ရမ်းဂစ် ၁၀၀ စီစုပြီး.သံဃာတော်တွေပင့်ပြီးဆွမ်းကပ်
ဒါလေးတွေထောက်ဆပြီး .အမှတ်တရလေးတွေလုပ်တတ်ကြတဲ့ရွှေမြန်မာတို့ဟာ အဝေးရောက်နေသော်
ဒီနေ့..ဗာရာဏသီ မြို့လေးမှာ..ညီညီညာညာနဲ့ ..မဇ္ဈိမသုခကျောင်းနေရာလေးသို့..ကားလေးတွေဖြင့်၎င်း..
ညီညွတ်ခြင်းရဲ့သရုပ်လေးတွေကို ဗာဂာဏသီမြို့ရဲ့ စရဏရပ်ကွက် မိဂဒါဝုန်တောအနီးနားမှာ.ထေရ၀ါဒဖြစ်တဲ့
သွားလာနေကြသည်ကား...သင်္ကြန်အကြက်နေ့တနေ့ရဲ့..မှတ်တမ်းအဖြစ်..ဒီ..post လေးတခု အဖြစ်..
Posted by ဗာရာဏသီကျောင်းသားလေး at 2:56 PM